Baaq ka soo baxay Isu-tagga Bulshada Rayid-ka Sooomaaliyeed | KEYDMEDIA ONLINE
Baaq ka soo baxay Isu-tagga Bulshada Rayid-ka Sooomaaliyeed
Waxaa soo kordhaya baaqyada loo dirayo Dowladda waqtigeedu dhamaaday oo ku addan in shirka wada-tashiga lagu qabto magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Urur-ka Isu-tagga Bulshada Rayid-ka Sooomaaliyeed ayaa ka mid noqday Urur-rada iyo shaqsiyaadka dalbanaya in shirka la iclaamiyay inuu dhacayo 15 Febaraayo lagu qabto Magaalada Muqdisho.
Isu-tagga Bulshada Rayid-ka Sooomaaliyeed ayaa DF iyo Dowladaha xubnaha ka ah ku eedeeyay in ay lumiyeen fursado badan iyo waqti qaali ah si loo dhaqan galiyo heshiiskii 17-kii September 2021 lagu gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Warqad ka soo baxay IBRS, ayaa lagu yiri “Si aysan u lumin kalsoomida dadku ku qabaan hore u socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya Isu-tagga Bulshada Rayid-ka, wuxuu soo jeedinayaa qodobada hoos ku qoran”.
In shirka lagu qabto Magaalada Muqdhio.
In shira ay goob joog ka ahaadaan wakiilllo ka socda Bulshada Rayidka ababulan iyo dhamaan dhinacyada aan looga maarmeyn.
In ciddii carqalad ku noqota shirka lagu baaqay lagula xisaabtamo masuuliyaddeeda.
In xasilloonida guud la wada ilaaliyo laga wada shaqeeyo sidii dalka doorasho uga dhici laheed.
Ugu danbeyn Urur-ka Isu-tagga Bulshada Rayid-ka Sooomaaliyeed, waxa ay wax-garadka ugu baaqeen in loo istaago raadinta heshiis dhab ah iyo hirgalinta doorasho loo dhan-yahay.